अनौठा पुरुष : जस्ले गरे गुडीयासँगै कानुनी रुपमा नै बिहे – List Khabar
Home / रोचक / अनौठा पुरुष : जस्ले गरे गुडीयासँगै कानुनी रुपमा नै बिहे
अनौठा पुरुष : जस्ले गरे गुडीयासँगै कानुनी रुपमा नै बिहे
admin August 6, 2021 रोचक Leaveacomment 85 Views
इन्दिरा भन्छिन्– हिमालमा पुगेपछि बिहेको प्र’स्ताव राख्नुभो, मैले स्वीकार गरेँ
घरमा बेला बेलामा माउसुलीले देखिन्छन् ? यस्तो हुनसक्छ संकेत
संसार रोचक र विचित्रका कथाले भरीएको छ । यहाँ मानिसहरु आ आफ्नै स्वभाव र ब्यबहारका छन् । जस्ले भिन्न देखिन र नाम कमाउनका लागी पनि अनेकन उपायहरु खोजीरहेका छन् ।
जसमध्येका एक हुन् डेभ क्याट । क्याट गुडीया भनेपछि मरिहत्ये नै गर्छन् । गुडीयालाई नै आफ्नो सबथोक ठानेका उनले गुडीयासाग धेरै समय बिताउृन थालेपछि गुडीयासँगै बिहे गर्ने निर्णय गरे ।
जिवनमा कहिल्यै अरुसँग बिहे नर्गने बचन नै खाएका डेभ क्याटले कैयौँ गुडीयालाई आफ्नो नजिकको साथी मानेका उनले कानुनी तवरमा नै गुडीयासँग बिहेवारी समेत गरेका छन् । जुन तस्विर अहिले ासमाजिक संजालमा भाइरल बनीरहेको छ ।
बिरामी भए अस्पताल पुगेका एक व्यक्तिको शरीरबाट जे कुरा निक्ल्यो त्यसले डाक्टरलाई पनि हैरान बनाएको छ ।भारत, मध्य प्रदेशको सतना जिल्लामा एउटा डरलाग्दो घटना देखा परेको हो । सो कुरा देखेर सबै छक्क परेका हुन् ।
वास्तवमा, त्यहाँ बस्ने एक व्यक्ति करीव दुई बर्षदेखि स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त थिए । जब डाक्टरहरूले उनलाई जाँचे, डेढ फिट लामो गँड्यौला आकारको सर्पजस्तो कीरा उनको पेटबाट निकालियो ।
यो देखेर मानिसहरू डराए । डाक्टरहरूले समेत यो कुन कीरा हो भनेर बुझेनन् । त्यस अवस्थामा, रेवा मेडिकल कलेजका डीन भन्छन कि यो एक गोलो कीरा हुन सक्छ ।जानकारी अनुसार डा. एसएन सिंह पालले भने, ‘बुधबार ३० जुन) बिहान ११ः१५ बजे पन्नाको भाठिया गाउँ निवासी शान मोहम्मद मकहाँ आएका थिए ।
Previous २८ वर्षीया सोमिकाले जन्माइन् प्र’सुति गृहमा पाँच ब’च्चा
Next के गायिका इन्दिरा जोशी विवाह गर्दै छिन् ? यदि हो भने को सँग विवाह गर्दै छिन् त ? थाहा पाउनुहोस् ।
जब यी व्यक्तिले अर्काको श्रीमतीसँग शा’री’रिक स’म्प’र्क राख्न निकाले को यस्तो जुक्तिले सबैलाई छक्क पार्यो
एजेन्सी । एक जना व्यक्तिले छिमेकी महिलासँग शा’री’रिक स’म्प’र्क राख्न आफ्नो घरबाट छिमेकी महिलाको घरसम्म …